Bvisai Parts Manufacturers - China Spare Parts Suppliers, Factory
Universal Joint mugodhi,
Gear panaakabatanidzwa pamwechete,
zvishoma nezvishoma mumatope Plate
Cross-ekisero Universal payakabatanidzwa
Kwakajairika Cross-ekisero Universal payakabatanidzwa
High-nokukurumidza Cold Rolling Cross-ekisero Universal payakabatanidzwa
Heavy-basa Cross-ekisero Universal payakabatanidzwa
Large Cross-ekisero Universal payakabatanidzwa
Kwakajairika Cross-ekisero Universal akabatanidzwa pamwechete:
Rinoshandiswa chaizvo simba kupararira metallurgia michina.
· High hutachiwana kunyatsoshanda, mafungiro guru uye pasi kumhanya ruzha;
· High simba nepakati zvakarurama, kusvikira G16 ~ G6.3;
· The chigadzirwa Murongerwo yave optimized kuti kakawanda, uye zviri nyore kuisa uye kuramba;
· Muchinyatsongwarira kudzora chigadzirwa kugadzira muitiro kuitira yakavimbika unhu;
· The kambani vaipinda / vaiitawo kukura indasitiri mitemo (2 National mitemo, 4 indasitiri mitemo);
· Core bvumidzwa kudzivirira (18 zvigadzirwa / utility womuenzaniso patents);
· Recommended mureza zvibereko Taier kunosangana mutengi zvinodiwa;
Uchishandisa tembiricha: -20 ~ + 80 ℃
Torque siyana: 18kNm ~ 1500kNm
Swing dhayamita: 160 ~ 590mm
Installation angled: ± 15 °
Maintenance kutenderera: 360h / nguva
High-nokukurumidza Cold Rolling Cross-ekisero Universal akabatanidzwa pamwechete:
Zvinonzi ainyanya kushandiswa huru ngarurege kubva chando-anokungurutsirwa jira dzaFord.
· High-mutoro akatakura kugona uye makuru hutachiwana torque;
· Zvingakudetsera mukuru-zvakarurama enzanirana spline peya;
· High simba nepakati zvakarurama, kusvikira G6.3;
· High hutachiwana kunyatsoshanda, kusvikira 98,7% -99,9%;
· The kambani vaipinda / vaiitawo kukura indasitiri mitemo (1 National mureza, 1 indasitiri mitemo);
· Core bvumidzwa kudzivirira (8 zvigadzirwa / utility womuenzaniso patents);
Torque siyana: 130kNm ~ 1150kNm
Swing dhayamita: 285 ~ 550mm
Installation angled: ± 5 °
Heavy-basa Cross-ekisero Universal akabatanidzwa pamwechete:
Zvinonzi ainyanya kushandiswa huru ngarurege inopisa-anokungurutsirwa jira, simbi nyere uye chikamu simbi dzaFord tikaisa chigayo.
· High akatakura vanokwanisa panguva zvinodiwa kuti kuparadzira guru torque uye guru mafungiro;
· Zvingakudetsera mukuru-zvakarurama enzanirana spline peya module;
· The kambani vaipinda / vaiitawo kukura indasitiri mitemo (2 National mitemo, 2 indasitiri mitemo);
· Core bvumidzwa kudzivirira (16 zvigadzirwa / utility womuenzaniso patents);
Torque siyana: 1700kNm ~ 19405kNm
Swing dhayamita: 600 ~ 1300mm
Kunonyanyisa angled: ± 10 °
Large Cross-ekisero Universal akabatanidzwa pamwechete:
Zvinonzi ainyanya kushandiswa huru ngarurege inopisa-anokungurutsirwa jira, chikamu simbi uye simbi nomutopota dzaFord.
· High akatakura vanokwanisa zvinodiwa kuparadzira guru torque uye guru mafungiro;
· The kambani vaipinda / vaiitawo kukura 1 indasitiri mureza;
· Core bvumidzwa kudzivirira (7 zvigadzirwa / utility womuenzaniso patents);
Torque siyana: 1700kNm ~ 5860kNm
Swing dhayamita: 600 ~ 900mm
Kunonyanyisa Kutsauka angled: ± 15 °
Korona Mazino Gear akabatanidzwa pamwechete
Kwakajairika Crowned Mazino Gear akabatanidzwa pamwechete
Heavy-basa Crowned Mazino Gear akabatanidzwa pamwechete
Bar And Wire Rod Mill Crowned Mazino Gear akabatanidzwa pamwechete
Heavy-basa Crowned Mazino Gear akabatanidzwa pamwechete Of Hot Tandem Kupedza Rolling mikoko
Kwakajairika Crowned Mazino Gear akabatanidzwa pamwechete;
· Optimized zino Profile parameters, uye akatakura kukwanisa iri yakawedzera 15 ~ 20% zvichienzaniswa zvakafanana zvigadzirwa pamusika;
· TG akatevedzana Taier zvinodiwa zvigadzirwa vane yakakwirira yose sezvakaita, zvakazara rokufukidza nokurondedzerwa vose 11 vomureza dzinotevedzana GIICL, GIICLZ, GCLD, NGCL, NGCLZ, WG, WGP, WGT, WGZ, WGC, WGJ;
· Large chisina kutsetseka misha yose kwezvavakaisa goho miseve anobvumirwa, ± 1.5 ° kungopa magadzirirwo ± 5 ° chaiwo patani;
· Core bvumidzwa kudzivirira (13 zvigadzirwa / utility womuenzaniso patents);
Torque siyana: 0.63kNm-1750kNm
Specification siyana: TG1 ~ TG38
Swing dhayamita: 103 ~ 1060mm
Installation angled: ± 1.5 °
Heavy-basa Crowned Mazino Gear akabatanidzwa pamwechete;
Zvinonzi ainyanya kushandiswa chikuru ngarurege kubva hot-yakanyikwa jira dzaFord rinopfungaira chigayo.
· Dual Positioning padivi zino uye zino pamusoro kuti uwedzere kushanda panaakabatanidzwa pamwechete;
· Optimized chisimbiso magadzirirwo kudzivirira kurasikirwa lubricating girisi, uye kubudirira kwenguva refu azere lubrication pamusoro vave nechekuita zino pamusoro;
Torque siyana: 1600kNm ~ 10750kNm
Swing dhayamita: 1080 ~ 1900mm
Installation angled: ± 1 °
Maintenance kutenderera: 500 H / nguva
Zvipfigiso Wire Rod Mill Crowned Mazino Gear akabatanidzwa pamwechete;
Zvinonzi ainyanya kushandiswa chikuru ngarurege kubva kubhawa uye waya tsvimbo chigayo.
· High-zvakarurama enzanirana spline peya nokuda unotedza zvishoma nezvishoma mumatope;
· Gear vaviri pamusoro Positioning kuti ishande;
· Zvingakudetsera danho-chinjika module;
Torque siyana: 31.5kNm ~ 1600kNm
Swing dhayamita: 200 ~ 760mm
Installation nzira: Vertical, Horizontal
Heavy-basa Crowned Mazino Gear akabatanidzwa pamwechete Of Hot Tandem Kupedza Rolling Anomirazve:
Zvinonzi ainyanya kushandiswa chikuru ngarurege inopisa-anokungurutsirwa jira dzaFord vasapedze rinopfungaira chikwata.
· Womukati kuparadzirwa kumanikidzwa dzakaonda mafuta lubrication michina China yokutanga indasitiri mutungamiri;
· Double-chisimbiso kuvaka kuitira hwakareba basa panaakabatanidzwa pamwechete mugodhi;
· High-pokuoma giya peya kuti akakura mutoro akatakura torque;
· The kambani vaipinda / vaiitawo kukura National / mitemo indasitiri (1 National mureza, 3 indasitiri mitemo);
· Core bvumidzwa kudzivirira (17 zvigadzirwa / utility womuenzaniso patents);
Eller Oil tembiricha: 20 ~ 45 ℃
Eller Oil kumanikidzwa: 1.2 ~ 1.8bar
Eller Oil kuyerera: 15L / Maminitsi
Torque siyana: 170kNm ~ 6000kNm
Swing dhayamita: 360 ~ 1100mm
Uchishandisa angled: ± 1.5 °
Internal Water Cooling (hafu-yakavharwa)
Internal Water Cooling (rakashama Type)
Rod - Plunger Wedge-mhando Mandrel (yanyatsosimba)
Rod - Plunger Wedge-mhando Mandrel
Internal Water Cooling (hafu-yakavharwa):
Akakodzera-refu nguva coiled;
Pave zvakajeka mafuta ndima mandrel kuburikidza kutonhora huru mugodhi;
Dzivisa nezvainoita mandrel girisi ezvinhu anokonzerwa coils vachibata, etc.
Kunonyanyisa coils uremu: 35T
Kunonyanyisa coils upamhi: 1650mm
Coiled Pfekenura ukobvu: 1.2-12.7mm
Coiled tembiricha: 100 ~ 850 ℃
Internal Water Cooling (rakavhurika Type):
Excellent mandrel utsigo; -refu nguva coiled.
Rod - Plunger Wedge-mhando Mandrel (yanyatsosimba):
Higher coiled vanokwanisa pakati mandrel;
The mandrel zvakakodzera guru Makakatanwa coiled uye coil pamusoro Mapaipi simbi pakati X80, X100, X120
Motor simba: 1850KW
Kunonyanyisa coils uremu: 41T
Kunonyanyisa coils upamhi: 2130mm
Coiled Pfekenura ukobvu: 1.2-25.4mm
Rod - Plunger Wedge-mhando Mandrel:
The Distributors nenyere nenhumbi vari kuunzwa zvinoriumba, uye lubrication zvakanaka akaramba;
Kunonyanyisa coils uremu: 48.7T (Max)
Kunonyanyisa coiler upamhi: 2400mm
Mandrel Of Pyramid mugodhi Type
Mandrel Of Wedge-rakashama Type
Mandrel Of Wedge-yakavharwa Type
Pyramid Sleeve Mandrel:
Vakawanda wakashandiswa decoiler iri kugadzirwa mitsetse, akadai flattening, pickling, reversible rinopfungaira uye recoiling; rinoshandiswawo muna recoiler pamwe kunetseka duku sezvinoita galvanizing mutsetse.
· Simple mamiriro, pfupi kugadzira kutungamirira nguva;
· Nyore nekukatanura uye kuramba;
Uchishandisa tembiricha: 0 ~ + 120 ℃
Rokunze dhayamita Specification: φ468, φ508, φ610, φ762
Strip upamhi: 2130 (Max)
Normal Nokuraramisa kutenderera: mazuva 180 / nguva
Mandrel Of Pyramid mugodhi Type:
Vakawanda kushandiswa mune recoiler kuti chando rinopfungaira dzaFord akadai Thando chigayo uye SENDZIMIR chando rinopfungaira guyo; rinoshandiswawo muna decoiler pamwe dzakakwirira makakatanwa zvinodiwa zvakadai munoenzanisa mutsetse.
· Rigidity Good, akakodzera hombe makakatanwa coiled;
· Axial kana TOUR hydraulic rushaya anogona kupiwa pamusoro chidimbu;
Strip upamhi: 2600 (Max)
Mandrel Of Wedge-pakachena Type:
Vakawanda wakashandiswa recoiler iri kugadzirwa mutsetse akadai galvanizing uye recoiling uye Carrousel recoiler.
· Simba Zvakanaka mandrel chikuru mugodhi;
· The axial achikanganisa pamusoro mandrel inowanzopiwa zvakagadzirwa kukandira mhangura, nezvakanaka kukweshera chokupika ari zvishoma nezvishoma mumatope pamusoro;
Mandrel Of Wedge-yakavharwa Type:
Vakawanda wakashandiswa recoiler iri kugadzirwa mitsetse akadai flattening uye kugadzirisa.
No musiyano pakati pedyo chidimbu kana mandrel zviri yakakwana denderedzwa.
Pre-dzakatakura matsime vari kuiswa mune chidimbu kuitira kuti havana anoputsa.
Hot Rolling achiveura mashizha
Plate chigayo yokuvevura mashizha
Cold Rolling achiveura mashizha
Hot Rolling achiveura mashizha:
Ainyanya kushandiswa kupisa kuramba rinopfungaira uye CSP kugadzirwa mitsetse
High zvakaoma, simba uye kuoma pane mukuru tembiricha
Akanaka chafariz kugadzikana uye chafariz Kuneta Performance
Good hardenability nokuda akadzokorora nokugeda
Uchishandisa tembiricha: 800 ℃ ~ + 1150 ℃
Size siyana (urefu): 650 ~ 2500mm
Pokuoma dungwerungwe: HRC42-50
Kugara basa kutenderera: 15,000times
Plate chigayo yokuvevura mashizha:
Ainyanya kushandiswa bwendefa paguyo rimwe 2800, 4300, etc.
High simba, mukuru kwoukukutu uye yakakwirira kuoma
Uchishandisa tembiricha: 0 ~ 200 ℃
Pokuoma dungwerungwe: HRC50-56
Kugara basa kutenderera: Vakagovana fura - mazuva 15 guru Disc fura - 7 days chinyorwa fura - Mazuva 15
Cold Rolling achiveura mashizha:
Ainyanya kushandiswa pakugadzira akarongwa chando rinopfungaira, chinopfuurira annealing, pickling, galvanizing, etc.
High kusakara nemishonga uye kusimba
yakatinakira multi-simbi chigadzirwa vegiredhi nokuveza
Kushanda tembiricha: Normal tembiricha
Pokuoma dungwerungwe: HRC54-60
Kugara yakawanda simbi chekawo: 3,000 -5,000 matani
Ematongerwo zvishoma nezvishoma mumatope Plate Of Work Roll Kubereka Chock
Ematongerwo zvishoma nezvishoma mumatope Plate Of Back Up Roll Kubereka Chock
Ematongerwo zvishoma nezvishoma mumatope Plate Of Rolling Mill Mira (redzimba Frame)
Rinoumba zvishoma nezvishoma mumatope Plate Of Work Roll Kubereka Chock:
Zvinonzi yakaiswa kumativi maviri basa rwakapetwa akatakura chock kudzivirirwa chinangwa.
· The kusakara rukoko nechigadziko ndiro inozviisa kwemakemikari uye metallurgia chisungo, pamwe yakakwirira Muitiro unobatanidza simba;
· The nomoto zvokunyama uye vanopfeka rukoko ukobvu inogona flexibly vakasarudzwa maererano zvakasiyana kushanda mamiriro uye vapfeke rukoko Ukobvu apera zvigadzirwa haidereri pane 2mm;
Pamusoro pokuoma: HRC50 ~ 55;
Uchishandisa tembiricha: 0 ~ + 350 ℃
Specification siyana (kunonyanyisa): 1000 × 600mm
Kugara ukobvu: 20 ~ 40mm
Normal Maintenance kutenderera: mazuva 180 / nguva
Normal upenyu basa kushandiswa: ≥24 mwedzi
Rinoumba zvishoma nezvishoma mumatope Plate Of Back Up Roll Kubereka Chock:
Zvinonzi yakaiswa kumativi maviri shure kumusoro mupumburu akatakura chock kudzivirirwa chinangwa.
Pamusoro pokuoma: HRC58 ~ 60;
Specification siyana (kunonyanyisa): 1800 × 900mm
Kugara ukobvu: 25 ~ 45mm
Normal upenyu basa kushandiswa: ≥18 mwedzi
Ematongerwo zvishoma nezvishoma mumatope Plate Of Rolling Mill Mira (pekugara Frame):
Zvinonzi yakaiswa kumativi maviri shure kumusoro mupumburu akatakura chock pamusoro chigayo kumira kudzivirirwa chinangwa.
· The akapfeka rukoko nechigadziko ndiro inozviisa kwemakemikari uye metallurgia chisungo, pamwe yakakwirira Muitiro unobatanidza simba;
Pamusoro pokuoma: HRC58 ~ 60
Specification siyana (kunonyanyisa): 1900 × 1000mm
Kugara ukobvu: 30 ~ 50mm